Anyị na-na-arụ ọrụ site na anyị rebranding si Blog Ahịa Blog na Onwuchekwa. Anyị ga-ekekọrịta ọkwa na ọdịnihu otu ihe kpatara anyị ji agabiga aha ahụ - mana imirikiti ya gbadoro ụkwụ na iwepu okwu ahụ blog site na mbupute anyi.
N'adịghị ka ọtụtụ saịtị, Twitter na-enye gị ohere gbanwee aha njirimara gị! Enwere m ike ịgbanwe @mktgtechblog ka @Igihe na akaụntụ m ma ghara ida nke ọ bụla n'ime ndị na-eso ụzọ 34,000 anyị anyị rụsiri ọrụ ike iji dọta. Ozugbo enyere aha njirimara ọhụrụ, anyị debanyere aha aha ochie anyị ozugbo wee debe ozi anyị kwagara.
Iji gbanwee njikwa Twitter gị, ịkwesịrị ịnyagharịa na gị Ntọala Page (ọ bụghị peeji nke profaịlụ). E depụtara njikwa gị na mpaghara mbụ. Can nwere ike ịmalite dee ihe ntanetị Twitter ọhụrụ iji hụ ma edobe ya. Ozugbo imelite ya na ihe ịchọrọ, naanị chekwaa ntọala gị. Ugbu a ị nwere gbanwere aka Twitter gị ma tufuo onye na-eso ụzọ ya!